किन काम पाईंदैन अष्ट्रेलियामा? बुझ्न र खोज्न परयो ! - Nepali Page
३ बैशाख २०७६, मंगलवार १२:५५ 349 पटक-पढिएको
यतिखेर अष्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जाल होस् या व्यक्तिगत भेटघाटमा धेरै नयाँ आउनेहरूले गर्ने गुनासो भनेको नै काम पाईएन भन्ने हो।
नेपालबाट ‘स्टुडेन्ट भिजा’मा आउने विद्यार्थी तथा सिधै ‘पीआर’ लिएर आउने आप्रवासीहरूले अष्ट्रेलिया आउनु अघि नै यहाँको काम, कमाई र खर्चको ’boutमा अध्ययन गरेर आईएन भने अष्ट्रेलिया बसाईंको पहिलो छ महिना निक्कै नै चुनौती पूर्ण हुन्छ। नेपालबाट बुनेका रूमानी सपनाहरू अष्ट्रेलियाको ‘सेयरिंग’को कोठामा पुग्दा धेरै नै ‘लो हाइट’मा झरिसकेको हुन्छ भने कामको कुरा आईसकेपछी त कुरै खतम। एक त काम पाउन निक्कै गाह्रो पाएपनि काम धानेर टिक्न गाह्रो अनि अर्को भनेको नेपालमा चिताएको भन्दा आकाश जमिनको फरक। त्यसमाथि थालमा चुठेर हिँड्ने पाराको सीप र शैली। नेपाली नवप्रवेशीलाई साह्रै गाह्रो र खपिनसक्नु हुन्छ जब आठ घण्टाको सिफ्ट पुरै उभिएर काम दन्काउनुपर्छ त्यो पनि चुस्त र फुर्तिलो गतिमा। कमै मात्र अष्ट्रेलियाको ’boutमा अध्ययन गर्ने धेरै सुनेका कुरा र फेसबुकका फोटाको आधारमा धारणाा बनाउने कतिलाई लाग्दो हो अष्ट्रेलियामा टेबलमा राखिएको कम्प्युटरमा फेसबुक चलाउँदै सहयोगीले बनाएर दिएको चिया पिउँदै डलर प्रिन्ट गर्नसकिन्छ। वास्तविकता चाहिँ कन्चटबाट बगेको पसिना तुरुरुरू कट्टु भिजाउने गरेर उँधो लाग्ने हुन्छ। मतलब, अष्ट्रेलिया ‘राजाका छोरी खेलीखाई बढेका..’ पाराकाहरूका लागी होईन, यो त परिश्रमी मौरीहरूको लागी अवसरको राजधानी हो। यहाँ दिनको १४ घण्टा किचनमा घोटिएर पढाई, खाना, बसोबास र फुर्मास गरेर पनि विद्यार्थीहरूले नेपालमा रहेका परिवारलाई धान्ने पैसाको जोहो हाँसी हाँसी गर्छन्। साताको ७० घण्टा काम गरेर, विश्वविजेता जस्तै समुन्द्रको छेउ र पबमा निस्फिक्री रमाउँछन् अनि फेसबुकमा फेसनेबल फोटो चिप्काउँछन्।
यहाँ क्लिक गरेर पढ्नुस् कसरी राम्रो रेजुमले सजिलै काम पाउम सकिन्छ अष्ट्रेलियामा
अष्ट्रेलियामा समय र सीपको व्यवस्थापन गर्न सफल विद्यार्थीले सातामा १५०० डलर सम्म कमाउन सक्छन्।
नयाँ आउनेहरूले नेपालको धङधङी छोडेर कामलाई सम्मानको नजरले हेर्ने हो भने काम नपाउने भन्ने नै हुँदैन। काम भनेसी भेटेको गर्न परयो अनि आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुरूप काम र आफू दुवैलाई अपडेट गर्न चुक्नुभएन। अष्ट्रेलियामा काम र कमाईको कुरा नेपालमा गरे सुने भन्दा फरक नै छ। जस्ता नेपाली विद्यार्थीहरू एकै पटक अष्ट्रेलियामा ‘क्लिनिङ’, ‘हाउसकिपिङ’ अनि ‘किचन ह्याण्ड’को शारिरीक फूर्तीका साथ गर्नुपर्ने काममा ‘एडजस्ट’ हुन सजिलै सक्दैनन्। त्यसको लागि दुई चार हप्ता समय लाग्नु पनि जरूरी नै छ। नेपालको ‘ह्याङ ओभर’ पनि सकिनु परयो अनि पढाई र त्यसको ‘फि’ तिर्नका लागी गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको जिम्मेबारीले पनि पोल्नुपरयो त्यसपछी त ‘काम भनेको जे पनि गरिन्छ’ भन्ने भनाई वास्तविकतामा परिणत भइहाल्छ। त्यसपछी अष्ट्रेलियाको कुनै पनि शहर चाहे सिड्नी होस् या मेलबर्न या त तासमानियाको होबार्ट नै किन नहोस्। विद्यार्थीले काम नपाउने र नगर्ने भन्ने हुँदैन।
अष्ट्रेलिया आएको एक दुई हप्तामा यहाँका रोजगारका सूचना हुने वेबसाइट तथा नेपालीपेज जस्ता अनुभव र शैली साझे गर्ने वेबसाइटहरू पढ्ने र तिनमा दिएका जानकारीहरूलाई पालन गर्दै कामका लागी ‘अप्लाइ’ गरेको खण्डमा काम पाउन गाह्रो हुँदैन। बुझ्नुस्, अष्ट्रेलियामा रोजगारदाताले कुनै पनि आधारमा तपाईंलाई भेदभाव गर्न पाउँदैन र तपाईले पाउने ‘तलब’ यहाँ ‘पे’ भन्ने चलन छ त्यो अरूको भन्दा फरक हुँदैन। क्याजुअलमा काम गर्दा २५ प्रतिशत सम्म बढी ‘पे’ पाइन्छ। त्यसैले आफ्नो नेपालको अनुभव र सिपलाई समेटेर ‘रिजुम’ बनाउनुस् र आफूलाई मिल्ने खालका पदहरूमा आवेदन (अप्लाई) गर्नुस्। अनलाईन अप्लाई गरेर यहाँका कम्पनीहरूमा काम गर्दा उनीहरूले तपाईंलाई भेदभाव गर्ने भन्ने हुँदैन भने ‘ट्याक्स’, ‘सुपर’, ‘इन्सुरेन्स’ लगायतका धेरै प्रणालीमा तपाई जोडिनुहुन्छ। साथै उनीहरूले साप्ताहिक राम्रो पैसा पनि दिन्छन र काम पनि अलिक सजिलो नै हुन्छ। यस्ता कम्पनिमा काम गर्दा करमा पे (तलब) दिने भएकाले ठगिने सम्भावना कम हुन्छ भने अरू काममा भन्दा पैसा पनि धेरै हुन्छ। यहाँ त्यस्ता कम्पनिको रोजगारीको सूचना हुने वेबसाइटको लिंक क्षेत्रगत रूपमा वर्गिकरण गरेर दिइएको छ जसबाट तपाई आफ्ना ’round भएका कामका अवसरहरू ’bout जान्न र उपयुक्तमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ:
Websites for General Jobs in Australia
Recruitment Agencies to findajob in Australia
सम्बन्धित शब्दहरू अर्न्तराष्ट्रिय विद्यार्थी अष्ट्रेलिया अष्ट्रेलिया अध्ययन अष्ट्रेलियामा काम अष्ट्रेलियामा नेपाली अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी कामदार नेपाली विद्यार्थी मेलबर्न लोअर पे विद्यार्थी भिजा विश्वविद्यालय सिफारिस गरिएको स्टुडेन्ट भिजा
अघिल्लो रीजनल जानेलाई आकर्षण: पीआर, काम र छात्रवृत्ति
पछिल्लो माल्टामा काम खोज्ने नेपाली विद्यार्थीलाई आमाचकारी गाली